MY REMEMBRANCE: ကာတွန်းကား ကြည့်မလား
Posted by puluque at Tuesday, November 25, 2008
ဟင်.. ဖြစ်ပုံ..ပုလုကွေး က အမ ထက်ပိုဆိုးနေပါလား။
ဒီပို့စ်ကိုရေးရတာ တော်တော် ဒုက္ခရောက်သွားတယ်.
ပုလုကွေး ကတော့ အရုပ်တောင်မတင်ပါလား။ဟဟ
မင်းမှားနေတယ်။ အဲဒီစက်ရုပ်ကာတွန်းက သုံးယောက်။ သူတို့သာမန်လူကနေ ဝတ်စုံတွေပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် လက်ကနာရီလေးကို နှိပ်ပြီး “I can swim” ဘာညာဘာညာ စသည်ဖြင့် အော်ပြီးတာနဲ့ ဝတ်စုံပြောင်းသွားတယ်။ ကုန်း၊ ရေ၊ လေ သုံးမျိုးမှာ တစ်နေရာစီ အစွမ်းထက်တဲ့ ယာဉ်တွေ လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ အနီရောင်ရယ်၊ အပြာရောင်ရယ်၊ အစိမ်းရောင်ရယ်..။ ဒါပါပဲကွယ်။ မှတ်မိသလောက်လေးပါ။
မှားနေတာ အမှန်ပြင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပဲ သယ်ရင်း..ငါကြိုက်လို့သာ အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေး ကိုချရေးလိုက်ပေမဲ့ ငါဝါးတားတားပဲမှတ်မိတယ်လို့ စကားခံထားတယ်နော်..ငါက အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာ မှတ်ဥာဏ်မကောင်းဘူးကွ...ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ ကာတွန်းကားလေးကို ပြန်ကြည်ချင်မိသေးတယ်...
power x tree လို့အော်ပြီးပုံပြောင်းသွားတဲ့ကာတွန်းကားလားဗျာ
tom and jerry အခွေ (၃၀)ကျော်ရှိတယ်
တွမ်အန်ဂျယ်ရီ ကာတွန်းကတော့ ကျနော့်ဖေးဘရိတ်ပဲ
အခုအရွယ်အထိ ကြည့်တုန်း ဟီး
ကဲ။ ပုလုကွေးမေ့တာတွေ အခု လင့်ပေးမယ်။ ကာတွန်းနာမည်က centurions , လူစွမ်းကောင်းတွေက Centrions! လို့ အော်ပြီး စက်ရုပ်တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားတာ ။ ကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ သွားကြည့် http://www.youtube.com/watch?v=keNpZG4xxgA ပုလုကွေးက တို့မြို့လေးကို မုန်းတာထက် မနေခဲ့ရတဲ့ တခြားနေရာအတွက် မုန်းစိတ်တွေ နေရာပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါ့မယ်။